विज्ञानको चमत्कार ! अब म`रेका मान्छेलाई पनि पुन, जिउँदो बनाउन सकिने डाक्टरको दाबी - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
विज्ञानको चमत्कार ! अब म`रेका मान्छेलाई पनि पुन, जिउँदो बनाउन सकिने डाक्टरको दाबी
विज्ञानको चमत्कार ! अब म`रेका मान्छेलाई पनि पुन, जिउँदो बनाउन सकिने डाक्टरको दाबी । के डाक्टरले एक व्यक्तिको टाउँको अर्को व्यक्तिको शरीरमा फि`ट गर्न सक्छन् ? मेडिकल साइन्समा अन्य अङ्गजस्तै टाउको प्र`त्या`रो`पण पनि सम्भव हुन सक्छ ?
बेलायतका एक पूर्व न्यूरोसर्जन तथा रोबोटिक्स विज्ञले यस विषयमा आफ्नो धारण राखेका छन् । बेलायतका हल यूनिभर्सीटी टिचिङ हस्पिटलका पूर्व क्लिनिकल प्रमुख डा ब्रुस म्याथ्युलेख आउँदो १० वर्षमा टाउको प्र`त्या`रोप`ण सम्भव हुने दाबी गरेका छन् । उनले रोबोटिक्स, स्टेम सेल प्रत्यारोपण र शक्तिशाली शल्यक्रिया गर्ने प्रविधिको विकास भएका कारण यो सम्भव हुन सक्ने दाबी गरेको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ ।
सन् २०१७ मा एक चिनियाँ साइन्टिस्टले एउटा सफल टाउको प्र`त्या`रो`पण गरेको दाबी गरेका थिए। जिआओपिङ रेन नामका एक साइन्टिस्टले एक मृ _त व्यक्तिको टाउँको अर्को व्यक्तिको शरीरमा सफल प्र`त्या`रो`पण गरेका थिए। चीनको हार्बिन मेडिकल यूनिभर्सिटीमा गरिएको उक्त शल्यक्रिया १८ घण्टा चलेको थियो ।
शल्यक्रियापछि स्पाइन, नब्र्स तथा ब्लड वेसल्सको रिकनेक्ट गरिइएको थियो। डेली मेलको रिर्पोटका अनुसार डा म्याथ्युका अनुसार प्र`त्या`रो`पका क्रममा यदी ब्रेन र स्पाइनल कार्ड साथमा राख्यो भने असम्भव हुँदैन्। यदी यो सम्भव भयो भने जुन व्यक्तिको हात खुट्टा का`टि`एको छ वा शरीर पूरै खराब भएको छ भने त्यस्ता व्यक्तिका लागि फाइदाजनक हुने गर्दछ। साथै म’` रिसकेका व्यक्तिलाई पनि जिउँदो बनाउन सकिन्छ।